बिहानै उठेर यी पाँच कार्य गर्नुहोस् तपाईको घरमा कहिलै पैसाको खाँचो हुदैन - नमस्ते खबर
बिहानबाट दिनको शुरुवात हुन्छ , यसर्थ प्रभातकालिन सत्कर्महरुले हाम्रो दैनिकीमा विशेष प्रभाव पार्दछन । वास्तवमा हरेक दिनहरुको समस्टिगत योग नै हाम्रो जीवन हो । तपाई हरेक बिहान गर्ने सत्कर्मले तपाईको जीवन निर्देशित गरिरहेको हुन्छ ।
विहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन ।
जीवनमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै परम्पराहरु मान्दै आएको पाइन्छ । तर दुखको कुरा आजकालको आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके ।
१. बिहानबिहानै हत्केला हेर्नुहोस
२. मन्दिर सफा गर्नुहोस
३. बिहानै भुमिलाई प्रणाम गर्नुहोस
४. गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस्
सधै बिहान जब रोटी बनाउनुहुन्छ तब पहिलो रोटी गाईको लागि छुट्याउनुहोस । तपाईको घर वरपर गाई छ भने त्यो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस । यसतो अर्थ लक्ष्मी माताको सेवा हो। रोटी नभए अन्य कुनै पनि आहारले लक्ष्मी माताको सेवा गर्न सकिन्छ ।
५. सुर्यलाई जल चढाउनुहोस्
महिलाहरू कुन अवस्थामा एकदमै बढी यौन सम्पर्क गर्न चाहान्छ ? सर्वेक्षणको रिपोर्ट यस्तो छ
कक्षा ८ मा अध्ययनरत १४ वर्षीय बालिकाले गरिन आत्महत्या